ALAKAMISY 6 JANOARY - ALAROBIA 12 JANOARY 2022
TSY FANAJANA ZON’OLOMBELONA : Nosamborina teny am-pandevenana an-drafozany i Augustin Andriamananoro
Mitohy ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanaparam-pahefana ataon’ny Fitondrana ankehitriny izay tsy manaja mihitsy ny zon’olombelona. 12 décembre 2016
Fisamborana tsy manaraka ny lalàna sy ny zon’olombelona no natao tamin’ny minisitra teo aloha Andrimananoro Augustin sady mpikambana eo anivon’ny Vondrona Mapar, ny sabotsy teo teny Itaosy nandritra ny fotoana nandevenana ny rafozam-baviny tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany no nisamborana azy.
Mpitandro filaminana am-polony nitondra fitaovana mahery vaika nanao bemidina teny an-toerana nisambotra an’ity minisitra teo aloha ity. Hetsika izay manitsakitsaka ny soatoavina malagasy, hoy ny mpanara-baovaa sy tsy manaja velively ny zon’olombelona. « Na dia tsy misoratra ao anatin’ny lalàm-panorenana izany dia tsy mety amin’ny Malagasy ny fisamborana olona iray tsy jiolahy akory amin’ny fotoana andevenany havany, anatin’ny fahoriana. Tsy manaja soatoavina malagasy izany.
Fa angaha tsy azon’ny mpitandro filaminana natao tamin’ny toerana sy fotoan-kafa ny fisamboarana an’ny minisitra Andriamananoro Augustin izay fantatra fa teto Antananarivo ? Ary maninona tokoa natao ohatran’iny ny fomba nanamborana an’ity farany nefa araka ny fantatra tsy mba nahazo taratasy fiantsoana na indray mandeha ny tenany ? », nambaran’ny ray amandreny iray teny amin’ny Fokontany 67ha Avaratra-Atsinanana izay milaza tsy mpanao politika fa manaraka akaiky ny fandehanan’ny raharaham-pirenena.
Araka ny fantatra tsy nampiseho taratasy fahazoan-dalana ireo mpitandro filaminana ary tsy fantatra ny tena antony nisamborana an’Andriamananoro Augustin. Nohamafisin’ny mpisolovava an’ity farany izany. « Tsy misy fiantsoana ka nandà izany ny minisitra Andriamananoro Augustin ka nanaovana « arrestation musclée » tahaka iny », hoy ny fanazavana nataon’ny mpisolovava. Nanaiky nanaraka ireo mpitandro filaminana Andriamananoro Augustin na dia tsy nanaiky ny havany. Mbola tsy nahafaly an’ireo be baoty anefa izany satria teny amin’ny lalana hiala an’ Anosizato noteren’ireto farany niala tao anatin’ilay fiara nisy azy sy ny mpisolovava azy Andriamananoro Augustin ary nasaina niakatra ao amin’ny fiaran’izy ireo.
Nandritra ny fotoana fohy nahafahan’Andriamananoro Augustin niresaka tamin’ny mpanao gazety tamin’ izany fotoana izany no nilazany fa mety fifandraisana amin’ny raharaha Soamahamanina ny fisamborana ny tenany. Fikasana hanongam-panjakana no mety hiampangana azy nefa tsy nanao afatsy miaro ny Tanindrazany miaraka amin’ny vahoakan’i Soamahamanina ny tenany, hoy izy. Voahitsakitsaka tanteraka ny zon’olombelona ary tsy misy azo antenaina ny amin’ny hanajan’ny mpitondra ankehitriny izany.
Hotaterinay miandalana eto ny fivoaran’ny raharaha mahakasika ny fisamborana an’ny minisitra teo aloha Andriamananoro Augustin ity.